Shirka Hay’adda Socdaalka Somaliya Oo Laga soo Saaray Go’aano la Xiriira Covid 19 – Awdalmedia
Agaasimaha guud ee Hey’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda Col, Maxamed Aadan Koofi ayaa furay Shirka Isku xirka Howlaha Laamaha iyo Xaafiisyada Hey’adda oo lagu qabtay nidaamka Fogaan aragga (Video Conference).
Sidoo kale waxaa warbixin howleedka sadaxdii bilood ee la soo dhaafay iyo qorshaha shaqo ee 3-da bilood ee soo socota shirka ku soo bandhigay loogana dhegeystay Agaasime waaxeedyada iyo masuuliyiinta laamaha ay Hey’addu ee ka howlgala Gobolada. Inkasta oo COVID19 saameyn ku yeeshey howlaha hay’adda hadana madaxda shirka ka qeybgashey dhamaantood ayaa muujiyay in inta badan qorsheyaashii hay’adda ee sedaxdii bil ay fuleen.
Hey’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda ayaa 3-dii bilood ee ugu danbeysay gudaheeda lagu soo kordhiyay Xafiisyo cusub ee Baasaboorka laga bixiyo kuwaas oo laga furay Degmada Diinsoor ee Gobolka Bay iyo Safaaradda Soomaaliya Switzerland ee Geneva, Xafiisyadaas cusub ayaa u adeegi doono Muwaadiniinta Soomaaliyeed ee baahida u qabo helidda Baasaboorka Soomaaliya. Sidoo kale Hey’adda ayaa 3-dii bil ee ugu dambeyso hormarin iyo casriyeyn ku sameysay habka qaadashada Baasaboorka. Dhinaca kale saraakiisha iyo howlwadeenada hay’adda ayaa ka qeybqaatey howlihii gurmadka ee daadadkii saameeyey gobolada qaar.